Barnaamijka Adeegyada Pretrial waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee leh isticmaalka maandooriyaha ama baahiyaha daaweynta caafimaadka maskaxda ee maraya nidaamka maxkamadda oo sugaya xallinta kiisaska ugu dambeeya. Adeegga waxaa dalban kara maxkamadda ama is-gudbin. Diidmada qofka ee ku lug lahaanshaha ma keeni karto eedeyn cusub ama ku xadgudub shuruudaha sii deynta.
Barnaamijka Adeegyada Pretrial wuxuu siiyaa laba heer oo taageero ah shaqsiyaadka lagu soo oogay dambi ka dhacay Vermont:
Baadhitaannada - Isuduwayaasha Adeegga Pretrial waxay siinayaan baaritaanno mutadawacnimo ah shakhsiyaadka lagu xusay ama loo xiray dambiyada qaarkood. Baadhitaanka Qiimaynta Khatarta ayaa wax laga waydiiyaa taariikhda dambiyada, iyo baadhitaanka Qiimaynta Baahiyaha ayaa wax laga waydiiyaa caafimaadka maskaxda iyo isticmaalka maandooriyaha. Natiijooyinka qiimeynta waxaa lala wadaagayaa dacwad oogaha loomana isticmaali karo eedaysanaha si loo caddeeyo dambiga. Ujeedada baaritaanadan ayaa ah in la helo calaamado hordhac ah oo ku saabsan in qofku haysto maandooriye isticmaalkiisa ama arrimo la xiriira caafimaadka maskaxda oo u baahan qiimeyn caafimaad.
Adeegyada Pretrial - Markii la baaro, kaqeybgalayaasha waxaa loo gudbiyaa adeegsiga maandooriyaha, caafimaadka maskaxda, iyo adeegyada kale ee bulshada ku saleysan ee taageerada leh inta ay marayaan nidaamka maxkamada ayna sugayaan xalinta dacwada ugu dambeysa.
Marka la eego qarsoodiga: Maaddaama tani ay tahay barnaamij maxkamaddu amartay, shaqaaluhu waxay wadaagi karaan oo keliya haddii shaqsigu kaqaybqaatay qiimeynta bukaan-eegtada iyo in kale, iyo haddii lagula taliyo daaweynta takhtarka iyo ka-qaybgalka Adeegyada Pretrial. Macluumaad kale lama wadaagi karo.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Adeegyada Pretrial, fadlan la xiriir
Katherine Doyle lambarka (802) 735-8274 ama iimayl ahaan kdoyle@burlingtonvt.gov